Aịzaya 42 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
42 Lee! Ohu m,+ nke m jidesiri aka ike!+ Onye m họọrọ,+ bụ́ onye ihe ya masịrị mkpụrụ obi m!+ Etinyewo m mmụọ m n’ime ya.+ Ọ bụ ikpe ziri ezi ka ọ ga-ewetara mba niile.+ 2 Ọ gaghị eti mkpu, ọ gaghị ekwu okwu n’olu dara ụda, ọ gaghịkwa eme ka a nụ olu ya n’okporo ámá.+ 3 Ọ dịghị ahịhịa amị a zọturu azọtu ọ ga-agbaji;+ ọ gaghịkwa emenyụ owu oriọna nke na-achọ ịnyụ anyụ. Ọ ga-eweta ikpe ziri ezi n’eziokwu.+ 4 Ike agaghị agwụ ya, ọ gaghịkwa ada mbà ruo mgbe o mere ka e nwee ikpe ziri ezi n’ụwa;+ ọ bụkwa iwu ya ka agwaetiti niile ga na-echere.+ 5 Nke a bụ ihe ezi Chineke, bụ́ Jehova, kwuru, bụ́ Onye kere eluigwe,+ Onye Ukwu nke setịrị ya;+ Onye gbasara ụwa+ na ihe niile dị n’ime ya,+ Onye na-enye ndị bi n’ime ya+ ume ha na-eku,+ na-enyekwa ndị na-ejegharị n’ime ya mmụọ:+ 6 “Mụ onwe m, Jehova, akpọwo gị n’ezi omume,+ m wee sere gị n’aka.+ M ga-echebe gị, meekwa ka ị bụrụ ọgbụgba ndụ nke ndị mmadụ,+ bụrụkwa ìhè nke mba niile,+ 7 ka i meghee anya kpuru ìsì,+ ka ị kpọpụta ndị mkpọrọ n’ụlọ mkpọrọ,+ meekwa ka ndị nọ ọdụ n’ọchịchịrị si n’ụlọ mkpọrọ pụta.+ 8 “Abụ m Jehova. Ọ bụ ya bụ aha m;+ agaghị m enye onye ọzọ nsọpụrụ m,+ agaghịkwa m enye ihe oyiyi a pịrị apị+ otuto m.+ 9 “Ihe mbụ niile—lee, ha emezuwo,+ ma, ọ bụ ihe ndị ọhụrụ ka m na-akọ. Tupu ha amalite ime, m na-eme ka unu nụ ha.”+ 10 Bụkuonụ Jehova abụ ọhụrụ.+ Bụọnụ otuto ya n’abụ site na nsọtụ ụwa,+ unu ndị na-agbada n’oké osimiri+ na n’ihe jupụtara n’ime ya, unu agwaetiti na unu ndị bi na ha.+ 11 Ka ala ịkpa+ na obodo ndị dị na ya na ógbè dị iche iche ndị Kida bi tie mkpu.+ Ka ndị bi na nkume dị elu+ tie mkpu ọṅụ. Ka ndị mmadụ nọrọ n’elu ugwu dị iche iche tisie mkpu ike. 12 Ka ha nye Jehova otuto,+ ka ha kọsaakwa ọbụna otuto ya n’agwaetiti dị iche iche.+ 13 Jehova ga-apụta dị ka dike.+ Ọ ga-akpọte ekworo dị ka onye agha.+ Ọ ga-eti mkpu, ee, ọ ga-eti mkpu agha;+ ọ ga-egosi na ya ka ndị iro ya ike.+ 14 “Agbachiwo m nkịtị kemgbe.+ Ekwughị m ihe ọ bụla.+ M jidere onwe m.+ Dị ka nwaanyị na-amụ nwa, m gaje ịsụ ude, kusie ume ike, kuokwa ume ọkụ n’otu mgbe ahụ.+ 15 M ga-ala ugwu ukwu na ugwu nta n’iyi,+ m ga-emekwa ka ahịhịa ndụ niile dị na ha kpọọ nkụ. M ga-eme ka osimiri ghọọ agwaetiti, m ga-emekwa ka ọdọ mmiri ndị ahịhịa amị jupụtara takọọ.+ 16 M ga-eme ka ndị ìsì jee ije n’ụzọ ha na-amaghị;+ m ga-emekwa ka ha jee ije n’okporo ụzọ ha na-amaghị.+ M ga-eme ka ebe gbara ọchịchịrị n’ihu ha ghọọ ìhè,+ meekwa ka ala dị mkputamkpu ghọọ ala dị larịị.+ Ọ bụ ihe ndị a ka m ga-emere ha. M gaghịkwa ahapụ ha.”+ 17 A ga-eme ka ha laghachi azụ. Ihere ga-emegbu ha, bụ́ ndị na-atụkwasị ihe oyiyi a pịrị apị obi,+ ndị na-asị ihe oyiyi a wụrụ awụ: “Unu bụ chi anyị.”+ 18 Nụrụnụ, unu ndị ntị chiri; lepụnụ anya ka unu hụ ụzọ, unu ndị ìsì.+ 19 Ònye kpuru ìsì, ma ọ́ bụghị ohu m, ònyekwa ka ntị chiri dị ka onye ozi nke m na-eziga? Ònye kpuru ìsì dị ka onye a kwụrụ ụgwọ, ma ọ bụ kpuo ìsì dị ka ohu Jehova?+ 20 Ị hụwo ọtụtụ ihe, ma i chebaraghị ha echiche.+ Ntị gị ghere oghe, ma i geghị ntị.+ 21 Ọ tọrọ Jehova ụtọ, n’ihi ezi omume nke onwe ya,+ ibuli iwu ya elu+ na ime ka ọ dị ebube. 22 Ma ha bụ ndị e bukọọrọ ihe ha, kwakọrọkwa ihe ha.+ A kpọchiri ha niile n’ime olulu. E zokwara ha n’ụlọ mkpọrọ.+ Ha aghọwo ndị a ga-ebukọrọ ihe ha n’enweghị onye nnapụta,+ ghọọkwa ndị a ga-akwakọrọ ihe ha n’enweghị onye ga-asị: “Bughachite ya!” 23 Ònye n’ime unu ga-aṅa ntị n’ihe a? Ònye ga-atọ ntị n’ala wee gee ntị maka ọdịnihu?+ 24 Ònye nyefere Jekọb ka a kwakọrọ ihe ya, nyefeekwa Izrel n’aka ndị na-ebukọrọ ihe mmadụ? Ọ́ bụghị Jehova, bụ́ Onye anyị mehieworo, onye ha na-achọghị ije ije n’ụzọ ya, onye ha na-egeghịkwa ntị n’iwu ya?+ 25 O wee na-awụkwasị ya ọnụma ya na iwe ya, meekwa ka agha kpaa ya aka ọjọọ.+ O wee na-ere ya ka ọkụ n’akụkụ niile,+ ma ọ maghị;+ ọ nọkwa na-ere ka ọkụ megide ya, ma o tinyeghị ya n’obi.+